မီးဖွား ပြီးနောက် ကိုယ်ခန္ဓာ-MamyPoko Myanmar
စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မတည် ငြိမ်မှု
မျှော်လင့်ချက် အတိုင်း ကလေး မွေးဖွား လာ၍ ပျော်ရ မှာကို ဘာကြောင့် စိတ်ရှုပ် ခြင်းတွေ စိတ်မ ရှည်ခြင်းတွေ ဖြစ်လာ တာဟာ မွေးဖွား ပြီးနောက် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မတည်ငြိမ် မှုလား?
စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မတည် ငြိမ်မှုလို့ ကြားရရင် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ပြဿ နာလို့ ထင်သူ လည်း များ၏။ တကယ်တော့ မွေးဖွား ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပြောင်း လဲခြင်းနှင့် နက်နက် ရှူိင်းရှူိင်း ပက်သတ် နေပါသည်။ ဘယ်သူ မဆို ဖြစ်နိုင် ခြေရှိပြီး၊ အထူး တလည်သော ကိစ္စ မဟုတ် သောကြောင့် စိတ်အေး စွာနေ နိုင်သည်။
တချို့သော အခြေ အနေ များသည် အကြောင်း ပြချက် မရှိ စိတ်တိုခြင်း၊ ငိုချင်စိတ် ဖြစ်လာခြင်း၊ ကောင်းစွာ အိပ်မ ပျော်ခြင်း၊ ကိစ္စ များလည်း မွေးဖွား ပြီးနောက် ၃-၄ ပတ် အတွင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်း ပြချက် မရှိ ဘဲနှင့် စိတ်မ အေးဖြစ် ခြင်းနှင့် ထိတ်ထိတ် ပျာပျာ ဖြစ်တတ်သည်။ သို့သော်မည်သူ မဆို ကလေး မွေးဖွားပြီး
သဘာဝ အလျှောက် ဖြစ်တတ်သော ကိစ္စဟု တွေးတောရန် အရေး ကြီးသည်။
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် များပြား နေသော ဟိုမုန်းဓါတ် များသည်မွေးဖွား ပြီးနောက် လျော့သွားသည်။ အခု လိုမျိုး မိန်းကလေး ဟိုမုန်းဓါတ် ပြောင်းလဲ မှုသည် သဘာဝ အခြေ အနေကြောင့် ဖြစ်ပွား ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အရင် ကနဲ့ မတူသော နေထိုင်မှု ပြောင်းလဲ ခြင်းကြောင့် စိတ်မအေး ဖြစ်ရ ပင်မဲ့လဲ ဟိုမုန်း balance ညီခဲ့လျှင် တော်တော် များများသည် သဘာဝ အလျှောက် ပျောက်ကင်း နိုင်သည်။
ကလေး ပြုစု မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော စိတ်ဖိ စီးမှုနှင့် မတူ ဘူးလား?
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မတည် ငြိမ်မှူ အဆင့်တွင် ဟိုမုန်း ဓါတ်များ ပြောင်းလဲ ခြင်းသည် အကြီး မားဆုးံ ကြောင်းအရာ ဖြစ်ပင် မဲ့လဲ၊ ညအချိန် ကလေး နို့တိုက် ရသည့် အလေ့ အထကို ကျင့်သား မရသည့် သူအ တွက်က စိတ်ဖိ ဆီးမှူ ဖြစ်ပေါ် နိုင်သည်။ ဤအချက် ၂ချက် သည် မသက်ဆိုင်ဟု မပြော နိုင်ပါ။ တတ်နိုင်
သမျှ စိတ်ဖိ ဆီးမှူမဖြစ် ပေါ်ရန် ကျွမ်းကျင်စွာ ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည်။
စိတ်မ တည်ငြိမ် လာရင် ဘာလုပ် မလဲ?
ကလေး ပြုစု စောင့်ရှောက်ရန် နည်းလမ်း မတွေ့ ပါက သင်သည် မျက်ရည်တွေ မထိန်း နိုင်အောင် ကျလာမည် ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ အခု လိုမျိုး အခြေ အနေ ဖြစ် လာ ပါက ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ရမလဲ?
ဟိုမုန်း balance ရဲ့ သက်ရောက် မှုကြောင့် လူအ များစုသည် အထိုက် အလျှောက် ကတော့ စိတ်ညစ် ရသည်။ (ကလေး မွေးလိုက် ရသည့် အတွက် အခု လိုမျိုး အခြေ အနေ ဖြစ်နေ သော ငါက ထူးဆန်း နေတာလား?)လို့ ကိုယ့်ဘာသာ အပြစ် တင်တာ
မျိုး မလုပ် ပါနဲ့။(အခု အချိန် ကတော့ ဒီလို ဘာဘဲ)လို့ တွေးတော၍ အလျင် စလို မလုပ်ဘဲ စိတ်ကို အေးအေး ဆေးဆေး ထားခြင်းဖြင့် စိတ်ဒဏ်ရာ မရအောင်ပြန်လည် ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ် ရမည်။
ပတ်ဝန်း ကျင်မှ အကူ အညီကို ယူရအောင်
စိတ်ပူ မှုကို မိမိ တဦးတည်း ပိုက်ထွေး ထားလျှင် တဖြည်းဖြည်း စိတ်ကျ ရောဂါ ဖြစ်လာ နိုင်သည်။ ယောကျာ်း၊ သူငယ် ချင်းများနှင့် တိုင်ပင် ခြင်းဖြင့် စိတ်ထွက်ပေါက် ရနိုင်သည်။ ကလေး ပြုစု စောင့်ရှောက် ခြင်းသည်လဲ စိတ်ဖိစီး နိုင်သည့် အ တွက် မိမိ မိသား စုကို ရင်ဖွင့် ပြောပြ၍ ပတ်ဝန်း ကျင်၏ ကြင်နာ မှုဖြင့် လိုအပ် ချက်ကို ဆွေးနွေး မှုသည် သင့်တော်၏။
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မတည်ငြိမ်မှူ ဖြစ်သည့် အတွက် ပုံမှန် ဆိုလျှင် အချိန် ကုန်တာနှင့် အမျှ ပြန်လည် ပျောက်ကင်း နိုင်သည်။ မွေးဖွား ပြီးနောက် ၄ပတ် အကြာတွင် စိတ်ခံ စားမှူသည် မတည် မငြိမ် ဖြစ်နေ သေးပါလျှင် ကလေး ဆေးခန်း ပြချိန်တွင် တစ်ကြိမ်လောက် ဆရာ ဝန်နှင့် တိုင်ပင် သင့်သည်။ ဆရာ ဝန်နှင့် တိုင်ပင် ရုံနှင့်လည်း စိတ်သက် သာနိုင်သည်။ အတွေး မလွန် စေရန်နှင့် လှုပ်ရှားမှု တွေကို ရွှေ့ပြောင်း ကြည့်ရအောင်။
စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မတည် ငြိမ်မှူ ဆိုပင်မဲ့ ကလေး ပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်း အလေ့ အကျင့် မရှိသည့် အတွက်ကြောင့် လုးံဝ ပြောင်းလဲ သွားသည့် နေထိုင် မှူကို စိတ်မ ပျော်မရွှင် ဖြစ်ခြင်း များမည်။ ဒါပင်မဲ့ ကလေး အတွက် အမေရဲ့ အပြုးံသည် အရေး ကြီးဆုးံ ဖြစ်သည်။ ကလေး အတွက်လဲ စိတ်ဖိစီးမှူကို ကျွမ်းကျင်စွာ ချေဖျက် နိုင်ရ မည်။ အရင်ဦးဆုးံ မိခင်သည် ကိုယ့်အတွက် စိတ်ဖိ စီးမှူကို ချေဖျက် နိုင်မည့် နည်းကို မိတ်ဆက် ပေးပါမည်။ လူတဦး ဆီသည် အောက်ပါ ဥပမာကို မှီငြမ်း၍ အပြုံး ဖြစ် လာအောင် နည်းလမ်း ရှာကြည့်ရန်။
အိမ်မှု ကိစ္စနှင့် ကလေး ထိန်းသိမ်း ခြင်းကို အကောင်းဆုးံ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ် ခြင်းဖြင့် ခန္ဖာ ကိုယ်ကော စိတ်ကော ပင်ပန်းတဲ့ အခြေ အနေတွင် ကလေး ထိန်းသိမ်း ခြင်း ကြောင့် မပင်ပန်း ရအောင် (ဒီလောက်ဆို တော်ပါပြီ) ဟု စိတ်ပိုင်း ဖြတ်နိုင် ခြင်းသည် အရေး ကြီးသည်။ အမေက ပင်ပန်း နေသည့် အခါ ready-made အစား အစာများ ပြင်ဆင်ခြင်း ၊အိမ်က အနည်း ငယ်ညစ် ပေနေလျှင် မသိချင် ယောင်ဆောင် ရန်တို့ ဖြစ်သည်။ ကလေး အတွက် ငိုခြင်းသည် အလုပ် ဖြစ်သည်။ ကလေး ငိုသည် ဆိုပင်မဲ့လဲ (ခဏ စောင့်နော်ဟု) ပြော၍ ချက်ချင်း ပြေးမလာ နိုင်လည်း အဆင်ပြေပါသည်။ အကောင်းဆုးံဖြစ်အောင် မိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း (ဒီလောက်ဆို တော်ပါပြီ) ဟု အမရဲ့ ပျော်ရွှင် မှုသည် ကလေးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ဖြစ်သည်။
ကလေး၏ နေထိုင်မှု စည်းချက် အရ ည အချိန်တွင် ငိုသံကြောင့် အမေ အများ စုသည် အအေး ဝဝ မအိပ် ရချေ၊ အအေး ဝဝ မအိပ် ရလျှင် ခန္ဓာ ကိုယ်သည် ပင်ပန်း လာမည်၊ စိတ်ဓါတ် တွေလဲ ကျလာသည်။ ညဖက် အိပ်ရေး မဝ ပါက နေ့ခင်း ကလေးနှင့် အတူ အိပ်ရန်။ တတ်နိုင် သမျှ အိပ်ချိန်ကို ဖန်တီး ရမည်ကိုတွေးထားပါ။
တူညီသော စိတ်ညစ် မှူကို မျှဝေ ပေးနိုင်သော ကလေး အမေ သူငယ်ချင်း ကတော့ ရှိသင့်သည်။ တယောက်တည်း တွေဝေ နေမည့် အစား အားလုးံအတူ တူ မျှဝေ ခံစား ပေးနိုင်သော အမေ ဘဝ သူငယ်ချင်း ဆိုရင်တော့ ကာကွယ် ပေးနိုင်သည်။ စိတ် သဘော တိုက်ဆိုင်သော အမေ ဘဝ သူငယ် ချင်းကို ပြုလုပ်ရအောင်။ ကလေးထိန်း center နှင့် ကလေး center အစ ရှိသော နေရာ များတွင် အပေါင်း အသင်း အဖြစ် ထားခြင်း၊ အခု တလောတွင် internet ခေတ်စား နေသော SNS ဖြင့် အသိ မိတ်ဆွေ ဖြစ်၍ ရင်းနှီး သွားသော သူများလည်း ရှိသည်။ ဒါပင်မ ကလေး အမေ သူငယ်ချင်း မဖြစ် မနေ ပြုလုပ် ရမည်ဟု pressure ဖြစ်လျှင်၊ ပြောင်းပြန် စိတ်ဖိ ဆီးမှူဖြစ်နိုင် သည့် အတွက် အတင်း အကျပ် လုပ်စရာ မလိုပါ။
ကလေးအိပ်နေသည့်အချိန်ကို refresh time အဖြစ်
ကလေး အိပ်နေသည့် အချိန်သည် အမေ အတွက် နားချိန် ဖြစ်သည်။ တခါ တလေ အိမ်မှု ကိစ္စဖြင့် အလုပ်လုပ် နေခဲ့သည့် အခါမျိုး ရှိသလို၊ တခါ တလေ ကိုယ်ပိုင် အချိန်ဖြင့် refresh လုပ်ကြည့်ပါ။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် သီချင်းကို တခြားသော
အခန်းတွင် နားထောင်ခြင်း၊ စာစောင်နှင့် မဂ္ဂဇင်းများ ဖတ်ရှုခြင်း အစ ရှိသည် များကို
လုပ်ကြည့်ပါ။ အထူး သဖြင့် စိတ်လှူပ်ရှား စရာ ကောင်းသော ရုပ်ရှင်များ ကြည့်၍ ငိုချ
လိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ငိုခြင်းသည် စိတ်ဖိ စီးမှုကို ဖြည်ချ ပေးနိုင် ပါသည်။
အလုပ် ရှုပ်သည့် နေ့ရက် များအတွင်း အနည်း အကျဉ်း ကြိုးစား နေသည့် မိမိ အတွက် ဆုချီးမြှင့် သလိုမျိုး အနေဖြင့် နည်းနည်း ဈေးကြီးသည့် နေ့ခင်းစာ ပြင်ဆင် ၍ စားခြင်း၊ internetမှ မိမိ လိုချင် တာလေး များကို ဝယ်ယူခြင်း၊ အိမ်မှူ ကိစ္စတွင် သက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်အောင် အိမ်ထောင် ပရိ ဘောဂ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ ခြင်းကို ယောကျာ်း ထံတွင်အပူ ကပ်ရန်။ အိမ်ရှင် မ၏ စိတ်သည် ကြည်လင်လျှင် ယောကျာ်း ကလည်း လိုက်လျော မည်ဖြစ်သည်။
အလုပ် လုပ်ခြင်း ကလည်း နည်းလမ်း တခု ဖြစ်၏။
ကလေး ထိန်းခြင်းဖြင့် ပင်ပန်း မှူနှင့် စိတ်ဖိ စီးလျှင် နောက်ထပ် အလုပ် တစ်ခု စတင်၍ ပြုလုပ် ခြင်းသည် နည်းလမ်း တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ကလေးထိန်း ကျောင်းမှာ သွားထားလျှင် ကလေးနှင့် အမေ အတူ နေချိန်သည် နည်းလာ မှုကြောင့် ကလေးနှင့် အတူ နေချိန်ကို တန်ဖိုး ထားသင့် သည်ဟု ဆိုကြသည်။
တစ်ယောက် တည်းနှင့် အလုးံ စုံသော ကိစ္စ များကို လုပ်လျှင် ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် stress တွေ စုပုံ လာလိမ့်မည် မဟုတ်လား။ ကလေး ထိန်းခြင်းသည် အတင်း ကြိုးစား ရမည် မဟုတ်ဘဲ ပတ်ဝန်း ကျင်ရဲ့ ကူညီ မှူကိုလဲ ရယူ သင့်သည်။
နှစ်ယောက် လုးံ၏ ကလေး ဖြစ်သည့် အတွက် ယောကျာ်းလဲ အတူ ကလေး ထိန်းရန် လိုအပ်သည်။ ရေချိုး ပေးသည့် အလုပ်ကို ယောကျာ်းကို လုပ်စေခြင်း၊ စနေ နေ့ဆို ယောကျာ်းကို ကလေး ကြည့်စေ၍ ကလေး အမေသည် သူငယ် ချင်းများနှင့် ဈေးဝယ် ထွက်ခြင်း မိခင်သည် မိမိ အတွက် အနည်း ငယ်သော အချိန်ကို ဖန်တီး နိုင်မှုကို ကူညီ ပေးခြင်းဖြင့် မိခင် သည်လဲ ပျော်ရွှင် နိုင်သည်။
ကလေး အမေ အနေဖြင့် ယောကျာ်းကို အကူ အညီ မတောင်းဘဲ ကိုယ့် ယောကျာ်းရဲ့
အလိုက် သိမှူကို လိုချင်ကြသည်။ ဒါပင်မဲ့ ယောကျာ်းသည် အိမ် ကိစ္စနှင့် ကလေး ထိန်းခြင်းကို ကူညီ ချင်ပင်မဲ့ ဘာလုပ် ပေးရမယ် ဆိုတာကို နားမလည်ကြဘူး။ အဖေ
သည် အမေထက် ပိုခက်ခဲ နေပါ သဖြင့် အသေး စိတ် အခြေ အနေ များနှင့် လုပ်ပုံ လုပ်နည်း များကို ရှင်းပြ သင့်သည်။ တဖန် (ကျွန်မ ကတော့ အဝတ် လျော်နေ ချိန်တွင် ယောကျာ်း ကတော့ ကြမ်းတိုက် ပေးနော်) ဟု ညှင်ညှင် သာသာ ပြောရန်။
ကူညီ ပေးသည့် အခါ မှာတော့ ကျေးဇူး ဘဲနော်ဟု ပြောရန်။ (ယောကျာ်း ကလေး နို့ဘူး တိုက်တာ တော်လိုက တာဟု ချီးကျုးရန်) အဲ့ဒီလို ဆိုရင် ယောကျာ်းရဲ့ စိတ်လဲ
လုပ်ပေး ချင်စိတ် ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။
အလုပ် ရှုပ်သည့် အိမ်ထောင် ဦးစီးကို အကူ အညီ တောင်းရ သည်မှာ ခက်ခဲ ပင်မဲ့လဲ နှစ်ယောက် စလုးံရဲ့ ကလေး ဖြစ်သည့် အတွက် ကလေး နိုးနေတဲ့ အချိန်မှာ မရှိပင် မဲ့လဲ မနက်ပိုင်း အမှိူက် ပစ်ပေး တာလောက်နဲ့လဲ အမေရဲ့ အလုပ် လျော့သွား နိုင်သည်။ တဖန် ယောကျာ်းရဲ့ အကြီး အမားဆုးံ အကူ အညီသည် မိန်းမ စကား နားထောင်ခြင်း ဖြစ်၍ ယောကျာ်း အနေ နဲ့လဲ အချင်းချင်း နားလည်မှူ ယူရန် stress များနေမှာ ဖြစ်သည်။ (ဒီနေ့ ကလေးနှင့် ပက်သတ်သော စကားကို ပြောကျ ရအောင ဆိုပြီးတော့) လင်မယား နှစ်ယောက် တိုင်ပင်ရန်။
အဖိုးနှင့် အဖွား ဆီမှာလဲ မြေးနှင့် နေချိန် ပေး၍ ပျော်ရွှင် စေရန်။ အဖိုးနှင့် အဖွားကို အကူ အညီ တောင်းနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေ အနေနှင့်၊ ရပ်ဝေးမှာ ရှိ၍ အမြဲ မလာ နိုင်သည့် အခြ အနေ ဆိုလျှင် လာလည်သည့် အခါတွင် ကလေး ကြည့်ပေး ပါဟု အကူ အညီ တောင်း၍ တခါ တလေ ယောကျာ်းနှင့် နှစ်ယောက်တည်း လျှောက် သွားခြင်း ပြုလုပ် ရပါမည်။ အဲ့လို မျိုးနှင့် ယောကျာ်းရဲ့ refreshပြန်ဖြစ် ခဲ့ရင်ကျေးဇူး တင်ပါ သည်ဟု ပြော၍ အလိမ်မာ သုးံရ ပါမည်။ တဖန် အဖိုးနှင့် အဖွား ကလဲ သူတို့ ကို တိုင်ပင်သည့် အတွက် ဝမ်းသာ ကြမည်။ ကလေး ချီပုံ ချီနည်းတို့ ချော့ပုံ ချော့နည်း တို့ကို ဖွင့်မေးကြည့် ကြစို့။ အချင်း ချင်းတိုင် ပင်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ တောင်းဆို နိုင်သည်။
ကလေး ဦးရေ နည်းလာ ခြင်းနှင့် မိဘနှင့် ကလေးသာ ရှိသည့် မိသားစု ပြောင်းလဲမှု များများ လာခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ကို အကူ အညီ မတောင်းသော အမေ များများ လာသည်။ လူတ ဦးသည် ၂၄နာရီ လုးံလုးံ ကလေး ထိန်းရ ပါလျှင် ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် stress များလာ မည်ဖြစ်သည်။ တခါ တလေ နေ့ကလေး ထိန်းကျောင်းနှင့် ကလေး ထိန်းများ ထံအပ် ခြင်းဖြင့် stress လျော့ချ ပေးရန်။ ဒေသ အလိုက် အခမဲ့ ကလေး ထိန်းကျောင်း များနှင့် ဈေးသက် သာစွာ ကလေးထိန်း center များရှိသည့် အတွက် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ အစိုးရ ရုးံများတွင် မေးမြန်း ကြည့်ရအောင်။ ပုဂ္ဂလိက service center တွေမှာလဲ ၁-၂ နာရီ အပ်နှံ နိုင်သည်။ ထိုအ ချိန်တွင် မိမိသည် အလှ ပြင်ဆိုင် သွားခြင်း ဖြင့်လဲ စိတ်သက်သာနိုင်သည် မဟုတ်လား?
stressကို ဖုးံအုပ် ထားမည် ဆိုလျှင်ဆိုးကျိုး ဖြစ်လာ နိုင်သည်။ ကလေး အဖေ ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်း ဖြစ်စေ၊ မိဘ ဖြစ်စေ ဘယ်သူဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခံ စားချက်ကိုဖွင့်ဟ ကြည့်ရအောင်။ စကား ပြောရင်းနှင့် စိတ်ခံ စားမှူ လျော့ကျ စေသည်။ ဘယ်လိုမှ ဖွင့်ဟ ပြောပြ ရမည့်သူ မရှိလျှင် ကလေးထိန်း support centers လိုမျိုး နေရာ များကို ဖုန်းဆက် တိုင်ပင်ခြင်း အစ ရှိသည်ကို ပြုလုပ်ကြည့်ပါဟု အကြံ ပေးပါ သည်။
မိဘနှင့် ကလေးသာ ရှိသည့် မိသားစု ပြောင်းလဲမှူ များများ လာခြင်းကြောင့် ကလေး
စောင့်ရှောက် မှူသည် အမေ များ၏ ကျောပိုး ထမ်းထား သကဲ့သို့ ပိုများ လာသည်။ တစ်ယောက်တည်း တွေဝေပြီး ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲ လာသည်။ လောလောဆယ် stress ဖြေဖျောက် နည်းရှာ ဖွေရန်။
အပေါ်မှာ ရေးသား ဖော်ပြ ထားသလို ပထဦး ဆုးံက (ကလေးသည် အမေနှင့် အဖေ နှစ်ယောက် စလုးံ စောင့်ရှောက် ရမည် ဆိုသော အချက်ကို ပြန်ညွှန်ပြမည်) ဖြစ်သည်။ ဂျပန်မှ အဖေ များသည် ကလေး ထိန်းချိန် နည်းသည့် အတွက် ကြီးမား သော ပြဿနာ ဖြစ်၍ နှစ်ယောက် တည်းတိုင် ပင်ခြင်းဖြင့်မိန်းမရဲ့ စိတ်သက်သာ ရစေမည့် နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် stress ဖြေဖျောက် နည်းသည် လူတ ဦးဆီ မတူ ကြပါ။ အပေါ်မှာ ရေးသား ထားခြင်း များသည် နည်းတ ခုတည်း မဟုတ် ပါသ၍ မိမိ ကိုယ်ပိုင် stressတွေ ဖြေဖျောက် နည်းရှာ ဖွေကြည့် ရအောင်။